Vaovao - Ahoana ny fitazonana sy fitantanana chassis bulldozer mandady
Fitaovana fanampiny Excavator
Vondrona Segment Sprocket
Vondrona Idler Front
Ahoana ny fitazonana sy fitantanana chassis bulldozer mandady
Crawler bulldozer dia fitaovana fanampiny ilaina amin'ny haitao fitrandrahana harena an-kibon'ny tany. Mampiasa marika toy ny Komatsu Caterpillar ny harena ankibon'ny tany amin'ny taona manaraka. -S Serivisy lehibe ny varotra. Ity manaraka ity dia fampidirana fohy ny fikojakojana sy fitantanana ny rafitra chassis bulldozer
1.Ny firafitry ny chassis
Ny chassis an'ny bulldozer mpandady dia misy kiraro, lozam-pifamoivoizana, roulant track, idler, silinder fihenjanana, frame crawler, sprocket drive, andry mizana, pivot afovoany ary ireo singa mifandraika amin'izany.
Ny antony mahatonga ny chassis dia mamaritra zavatra telo lehibe: ny toe-tany ifandraisany amin'ny chassis, ny hafainganam-pandehan'ny fivezivezena ary ny enta-mavesatra amin'ny fitaovana. Ireo singa 3 ireo ihany no afa-po tanteraka, ny fahaiza-manao dia miteraka fihenan'ny chassis.
Ny chassis an'ny akanjo dia azo fintina toy ny indray, afaka mifehy ny lafin-javatra, ao anatin'izany ny fanitsiana ny rojom-pitandremana, ny sakan'ny fizarana (afaka misafidy), ny hafainganam-pandehan'ny fitaovana ary ny halavirana, ny chassis mihetsika faritra mitafy ny fiaraha-miasa sy ny lubrication fepetra, ny fampiasana ny rafitra familiana, ny chassis ary ny fivezivezena amin'ny tany, ary ny fahaizan'ny mpamily, sns. lafiny tsy voafehy, anisan'izany ny fitaovana mifandraika amin'ny chassis, ny enta-mavesatra vokariny niforona niaraka tamin'ny fitaovana nandritra ny hetsika, ny fananganana ny chassis surface firaiketam-po sy ny hamandoan'ny tany, sns.
3.Fikojakojana ny chassis
Serater bulldozer enta-mavesatra an'ny D9, D10 ary D11 dia mampiasa tombo-kase vy, tombo-kase vy tsara, ny famehezana azy dia tsara, mitafy fiainana manodidina ny 4000H. Manakaiky ny 4000H, nanomboka namoaka solika ny tombo-kase, ka nahatonga ny fikororohana maina teo amin'ny tsimokaretina fitambarana. fiainana chassis, ny tombo-kase rohy dia tsy maintsy soloina akaikin'ny 4000H ampiasaina.
Ny fiainana anton'ny tombo-kase an'ny rohy dia 4000H, fa ny ain'ny rohy dia miova arakaraka ny fampiasana sy ny etona. Raha ny marina, ny ain'ny rohy dia 3000-5000h. Raha miasa ratsy ny fitaovana ary mandeha lavitra matetika, dia hahena ny ain'ny tombo-kase mampifandray. mihoatra ny 3000H, ny tombo-kase dia tokony hozahana matetika amin'ny famoahana. Raha vantany vao hita ny fivoahana, ny tombo-kase rehetra amin'ny rohy rojo dia tokony hosoloina avy hatrany. Mandritra izany fotoana izany dia tokony hojerena ny fahasimban'ny pin misy tsikombakomba raha simbaina, raha tsy izany dia esorina tsy ho ela ny rojo vy, paingotra, rohy rojo.
Ny haavon'ny kiraro lalamby manontolo dia tokony hifanaraka, mba hiorenan'ny fiasan'ny vatan'ny fiara iray manontolo, hihena ny hovitrovitra mandeha, ary hihatsara ny fiainam-panasiana tombo-kase sy ny fanoherana ny akanjo. Ny takelaka dia mahatratra na latsaky ny 100% amin'ny sanda azo ekena (izany hoe, ny haavon'ny faka misy ny takelaka dia 38mm), ny kiraron'ny làlana dia tokony hesorina sy amboarina. Rehefa mihoatra ny 120% ny sandam-bola azo ekena ny diplaoma anaovana (25,5mm fotsiny ny haavon'ny faka), ny takelaka dia tsy misy lanjany fanamboarana.
Ny faritra anaovan'ny endriny dia misy: roller roller, idler, roller roller, varingarina ary varingarina miady saina ary faritra mihetsiketsika hafa. Ho an'ireo faritra mihetsika ireo dia matetika mandinika ny fihetsiky ny toe-javatra, isaky ny 2000H mba hanamarinana ireo kofehy mifatotra amin'ny faritra tsirairay amin'ny ny toe-javatra mifatotra, ny fanoloana ny kodiarana lanja eo amin'ny lafiny iray sy ny lafiny roa, isaky ny 2500H amin'ny vatan'ny fiara dia manosotra diloilo. mahatratra 100% ny sandam-bola azo avela), izany hoe, ny habetsaky ny akanjo tokony hosoloina ara-potoana rehefa 32.5mm, ary tena zava-dehibe ny fisafidianana toetra amam-panahy avo lenta sy serivisy tsara aorinan'ny varotra hamokarana mpanamboatra sambo.
Ny vokatra sy ny vahaolana dia aondrana any Eropa, Etazonia, Rosia, Angletera, Frantsa, Aostralia, Moyen Orient, Amerika atsimo, afrika, atsimo atsimo ary firenena hafa ary faritra. Eken'ny mpanjifa erak'izao tontolo izao ny vahaolana. Ny orinasan-tserasera dia manolo-tena hanatsara hatrany ny fahombiazan'ny rafitra fitantanana mba hampitombo ny fahafaham-po ny mpanjifa. Manantena izahay fa hiara-hiasa amin'ny mpanjifanay mba hamorona fandresena mandresy. Tongasoa hiaraka aminay!
Bearing Track Roller, Rubers Track Rollers, Bolt matanjaka avo, Bit mifarana roa, Excavator Bucket Cutting Edge, Excavator Bucket Wear Parts,